UKWAMKELWA KOMTSHATO KUHLELI EZINYE IINDLELA ZESIDLO SANGOKUHLWA - IINGCEBISO ZOKUCWANGCISA
Eyona Iingcebiso Zokucwangcisa Iindlela ezizezinye zokutya kwiDin-Down Dinner
Ukuba isithethe, isitulo sokuhlala phantsi asiyiyo indlela yakho, ungakhathazeki. Kukho ezinye iindlela zokondla ezimnandi kanye (kunye nolunye uhlahlo-lwabiwo mali). USarah Photography
UCarrie Anton ngumbhali wamava ozisebenzelayo kunye neqhinga lokuqukethwe.
UCarrie waseka ngokubambisana Wonder: I-Studio ye-Idea, indawo yokucebisa eMadison, eWisconsin.
Ukutya isidlo esiqhelekileyo, esityiweyo kumsitho wakho womtshato kuyathandeka, ngakumbi kwimicimbi esesikweni kakhulu. Kodwa ukuba isidlo sokuhlala phantsi asisiyo isitayile sakho okanye ngaphandle kwexabiso lakho (khumbula, ukuhlala phantsi isidlo sangokuhlwa kubandakanya iirhafu zelinen, izitulo, useto lwendawo kunye neemenyu ukongeza kukutya), uya konwaba ukuva ukuba kukude kuphela kokhetho lokutya. Ukuhlala kwezinye iindlela zangokuhlwa akusathathelwa ingqalelo kwimitshato engaqhelekanga okanye ephantsi kuhlahlo-lwabiwo mali. Nazi ezinye zeendlela zokuyila zokuthintela iindleko zokutya ngelixa uchukumisa ukwanelisa zonke iindwendwe ezilambileyo.
Isitayile seCocktail akufuneki sithethe ngokungaqhelekanga.
ikhona kumyeni ovela kumtshakazi
Ukucwangcisa i-fete ngokusesikweni kodwa awukwazi ukujija isidlo sangokuhlwa? Enye into egqibeleleyo, engalindelekanga yindlela yokwamkela i-cocktail. Cinga ukuseta izitishi zokutya eziphekwe ngabapheki zombini ezimnandi kwaye ziyabandakanyeka, okanye iiseva zidlulisa ukungena kwitayipas ezincinci ngokwaneleyo ukuba zingabinakho ngelixa zixubana, kodwa zisanelisa ngokupheleleyo (okanye zinike zombini ukhetho ngaxeshanye).
Iilori zokutya yindlela emnandi yokutya.
Ukuba ne itraki yokutya okanye ezimbini ukutsala ulwamkelo lwakho luluhlobo oluhle lokutya oluvumela ukukhululeka kunye nokuhamba ngokukhululekileyo. Gcina ukhumbula nje ukuba iindwendwe azizukutyiswa ngokukhawuleza okanye ngaxeshanye. Nangona ulindele ipati yohlobo lokutyisa, oku ngekhe kube ngumcimbi omkhulu.
Ukuhlala kunye nenkonzo ziphambili.
Isibonelelo esikhulu sokungahambi isidlo sangokuhlwa kukuba iindwendwe zinenkululeko yokuxubana kunye nokudanisa ngaphandle kokubanjwa kwizitulo abazabelweyo. 'Endaweni yeetafile ezisesikweni, sisebenzisa iitafile eziphezulu kunye neendawo zokuhlala kwigumbi lokuphumla ukunika igumbi ukuhamba kakuhle kwaye sivumela iindwendwe ukuba zihlale kumgangatho wokudanisa nangesidlo sangokuhlwa, utshilo uJoe Volpe, umseki kunye ne-CEO ye Iqela lomsitho waseCescaphe . Kwaye khumbula: Inkonzo enkulu sisitshixo somsitho, wenqanaba lokuqala. Inqanaba lenkonzo kunye nokuhonjiswa okukujikelezileyo kunokwenza nokuba ukuseta isikhululo esingaqhelekanga kubonakale ngathi kusemthethweni. Iindwendwe ezininzi ziyakhathalelwa kwaye zilindelwe, kokukhona iya kupolishwa. ' Imicimbi kaTaylor .
Yenza imenyu yakho ibe yeyakho.
akukho bantwana kumagama omtshato
Nokuba ukhetha yiphi indlela yokutya, sebenza nabapheki kunye nabasebenzi besiza ukukhetha imenyu ehambelana nesimbo sakho somtshato kunye nawe njengesibini. Yiba neecuisine ezinqwala kwidolophu yakho, isixeko osithandayo okanye imvelaphi yobuhlanga. Ukuba ufuna i-vibe yepati ekhululekile ngakumbi, dlulisa izilayi zepitsa, ipopcorn okanye iitacos.
Izipho zomtshato zokuqala zomyeni
izimvo ezivulekileyo zekhitshi
Umama womyeni uyakhupha
Izimvo zesipho seminyaka engama-25 zabahlobo
Imibono yeminyaka eli-1 yokukhumbula umyeni
sisiphi isandla esitshatileyo